12 Ụlọ mgbapụ kacha mma n'ụwa | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Ụlọ mgbapụ kacha mma n'ụwa
Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Zụlite Travel Greece, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 05/11/2021)
Na -akpali akpali, egwu, mmekọrịta, ụwa dị n'okpuru ala, ma ọ bụ Villas oge ochie, na 12 ụlọ mgbapụ kacha mma n'ụwa, abụghị maka ndị obi na-adịghị ike. Na ntụle, naanị ndị nwere obi ike, ndị egwuregwu otu egwuregwu na ndị hụrụ egwuregwu n'anya ga -aga nke ọma n'ịzọpụta ụwa, na ikpughe ihe nzuzo echefuru echefu. Ọ bụrụ na ị chere na ị nwere ihe ọ na -ewe, wee dee otu n'ime ihe ndị a 12 ụlọ mgbapụ kacha mma n'ụwa, ma gbalịa imeri nsogbu ndị ahụ.
1. Ụlọ Sherlocked Escape Room Amsterdam
Akpọrọ ya aha onye nyocha kacha ama n'ụwa, Ụlọ mgbapụ Sherlocked bụ otu n'ime ụlọ mgbapụ kacha atọ ụtọ n'ụwa. Na Sherlocked ị nwere ike họrọ n'etiti 2 ahụmahụ dị nnọọ iche; Onye na -ese ụkpụrụ ụlọ ma ọ bụ Vault. Otu bụ 60 nkeji ogologo, na nke abụọ bụ 80 nkeji ogologo, ha abụọ dị mma maka otu 4 ndị mmadụ, a na -anabata ndị nne na nna na ndị nọ n'afọ iri na ụma.
Otú ọ dị, ihe dị iche n'etiti ụlọ mgbapụ abụọ ahụ bụ ọrụ. Onye na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ ga -agwa gị ka ị dozie ihe omimi n'ime ụlọ ọhụrụ ka ịdebe ihe nzuzo kacha echebe n'ụwa. N'akụkụ aka nke ọzọ, Vault ga -eme ka ị gbanwee ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị ohi iji zuru ihe dị oke ọnụ ahịa na nchekwa echekwara nke ọma. Ọtụtụ tupu ịnwale ma daa, mana ndị otu gị nwere ike bụrụ onye ga -eme nke ọma na nzuzo a dị aghụghọ. Ya mere, ụlọ mgbapụ a na -esonye ihe ndị pụrụ iche ị ga -eme na Amsterdam.
2. Gbanahụ ichu nta n'ụwa niile
Ụlọ mgbapụ Hunt nwere alaka n'ọtụtụ ebe n'ụwa, si England ruo Singapore. Ọ bụrụ na ị hụrụ ihe okike n'anya pụrụ iche, Akụkọ Disney, na Alice, mgbe ahụ ị ga -ahụ ụlọ mgbapụ a n'anya wee gaa njem maka naanị ebumnuche mgbapụ, na mba ọ bụla.
Ime ụlọ mgbapụ nwere ndepụta ụlọ mgbapụ, dị iche na mba ọ bụla. Na Marseilles, ị ga -achọ ndị enyi mgbe Houdini mere ka ha pụọ ​​n'anya na nnukwu circus, ma ọ bụ na UK na -enyere Alice na ndị enyi aka ịchekwa Wonderland. Ya mere, ihe mgbagwoju anya na ihe omimi nke ụwa chọrọ enyemaka na amamihe gị n'obodo ukwu n'ofe Europe na Eshia.
3. Enigma Quest na London
Emi odude ke Finsbury, adịghị anya site na London Bridge na Osimiri Thames, Enigma Quest ụzọ mgbapụ na -enye 3 quests dị ịtụnanya. Ọ bụrụ na gị na ndị enyi na -eme njem, ezinụlọ nwere ụmụaka, ma ọ bụ di na nwunye na -achọ ihe egwuregwu, mgbe ahụ ị nwere ike họrọ n'etiti ụlọ mgbapụ nke okpuru mmiri miri emi na heist nde paụnd.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na -achọ adrenaline, ikekwe Thelma na Louise na -esote? mgbe ahụ ilu ndị dị na Enigma Quest zuru oke maka gị. Na Mission Wavebreak ị ga -azọpụta ụwa, na nde Pound Heist, ị ga -ejikọ aka ọnụ maka ihe nrite kachasị ukwuu na akụkọ ntolite nke oge a. Ya mere, ọ bụrụ na ị chere na ị nwere ihe ọ na -ewe, mgbe Enigma Quest Ụlọ mgbapụ dị n'etiti London emebela gị ọmarịcha njem nkeji 60.
4. Ọrụ Paradox 2: Ebe a na -ere akwụkwọ na -agbapụ n'ụlọ Atens
Ọ bụrụ na ị bụ onye mgbapụ nke ụlọ mgbapụ, mgbe ahụ Paradox Project 2 na Athens bụ ahụmịhe ụlọ mgbapụ kachasị. N'adịghị ka ụlọ mgbapụ ndị ọzọ dị ịtụnanya n'ụwa, Ozi Paradox Project nwere ụlọ neoclassical dum na Athens. Nke ahụ dị mma, ọchịchọ gị gbasara n'ọtụtụ ụlọ na amaokwu nzuzo n'ime ụlọ a pụrụ iche.
Ọzọkwa, ụlọ mgbapụ ụlọ ahịa bụ a 200 nkeji nkeji, nke nwere ike kewaa ya n'ụzọ dị mfe 5-6 ime ụlọ mgbapụ. Ya mere, ị ga -anụrịrị ihe kacha mma n'ụwa niile, na nke ahụ bụ ahụmịhe ụlọ mgbapụ dị oke ọnụ ahịa. Nhazi mara mma nke nwere egwuregwu mgbagwoju anya, otutu oghere, steepụ, na-echere ndị na-achọ obi ụtọ n'ime ezigbo ụlọ ahịa akwụkwọ na Athens.
5. Maazị. X Ụlọ ihe omimi Shanghai
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị skyscrapers na Shanghai, Maazị. Ụlọ ihe mgbagwoju anya nke X ga -abụ nnukwu ezumike n'obodo mepere emepe. Ụlọ mgbapụ a dị ịtụnanya nwere 5 ime ụlọ, nke ọ bụla nwere ihe omimi dị iche iche ọ ga -edozi. Ị kpọchiri akpọchi n'ime ụlọ otu awa, na -enweghị echiche ọ bụla nke nnukwu foto. Ihe ịma aka bụ iji ihe niile dị n'ime ụlọ, na ọbụna n'okporo ámá, iji gbalịa chọta ụzọ ị ga -esi pụọ n'ime ụlọ ahụ.
Maazị. Ụlọ mgbapụ X jupụtara na ihe omimi na ihe ịma aka. N'adịghị ka ụlọ mgbapụ ndị ọzọ dị egwu n'ụwa, ebe a ka ndị otu gị ga -eji uche niile, nleba anya, na mgbagha, ka ịchọta ụzọ ị ga -esi pụọ n'ime ụlọ ahụ. Maazị. X Mystery House dị n'etiti Bridge 8 II, Mpaghara Huangpu, ebe njem na -amalite ozugbo site n'ọnụ ụzọ.
6. Ụgbọ mmiri gbanahụ na SOS ụzọ mgbapụ Dublin
Ime ụlọ ụgbọ mmiri pụrụ iche dị na Dublin bụ otu n'ime elu 10 ụlọ mgbapụ n'ụwa. Ebe a, ọ ga -adị gị mkpa itinye amamihe gị na ume gị niile wee chọta ụzọ ị ga -esi pụọ n'ụgbọ mmiri. N'ezie, Boatsgbọ mmiri na ụlọ SOS dị n'ụgbọ mmiri, pụọ na ọdụ ụgbọ mmiri Dublin.
Ya mere, Ime ụlọ mgbapụ ụgbọ mmiri na SOS bụ ụfọdụ n'ime ụlọ mgbapụ pụrụ iche n'ụwa. Ụzọ ọpụpụ jupụtara na mgbagwoju anya, na-echebe koodu, na idozi ihe omimi. Ọ bụrụ na ime ụlọ mgbapụ bụ akụkụ nke mmemme pụrụ iche, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịhazi nri mkpịsị aka site na Ogwe ndị dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Nnukwu ihe omimi dị na Budapest na -eche gị n'ime ime ụlọ mgbapụ ParaPark. Ị ga-agbadata ịhụ ntụpọ dị n'akụkụ ụlọ mgbapụ mbụ na Europe. Ebe a, ị ga -ahụ onwe gị na ọnọdụ mpụ, Ejima ọnụ ọnụ n'ike mmụọ nsọ. Ya mere, dịrị njikere igwu egwu onye nchọpụta, ma nyere ndị otu gị aka n'igbe ahụ, dị ka ị na -eche n'ime igbe, ma ọ bụ okpuru ulo, n'ihi na okwu.
Mpaghara mpụ 95 dị na NYC, ebe ndị ohi na -alụ ọgụ n'okporo ụzọ, na ọdachi na -eme. Ya mere, a ga -akpọ gị ka ịchọta ihe ngosi, chekwaa akwụkwọ iji chọta onye omekome ahụ tupu ngwụcha otu awa. ikwubi, Ime ụlọ mgbapụ ParaPark bụ maka ndị nwere obi ike na ndị hụrụ akụkọ mpụ n'anya.
8. Ime ụlọ Berlin
Ụlọ ahụ nwere 4 ozi, onye ọ bụla 75 nkeji ogologo, nke ọ bụla na -ama aka, na nke ọ bụla ga -eme ka ị na -eme njem n'oge. Chọta akụ na Mahadum Humboldt, ihe omumu ya na onye kacha achụ nta mmụọ, ma ọ bụ na -enyere nnukwu onye nyocha Berlin aka ijide onye gburu Berlin, o doro anya na ọrụ ndị a abụghị maka onye egwu na -atụ ụjọ.
Ya mere, jiri nlezianya họrọ ihe ịma aka gị, biakwa nwee amamihe nke ọma, akwa, na obi ike. Ụzọ mgbapụ ime ụlọ na Berlin bụ 2017 Onye mmeri Golden-Lock, emebere iji maa onye na -anụ ụlọ ọ bụla ụzọ mgbapụ aka. Ọzọkwa, ime ụlọ mgbapụ a bara uru maka njem na Berlin, maka ugboro abụọ na ise.
9. The Catacombs ụzọ mgbapụ ụlọ Paris
Ụlọ mgbapụ a na -adịghị ahụkebe na Paris bụ naanị maka ndị nwere obi ike. Ọ bụrụ na ịchọpụtabeghị aha ahụ, ime ụlọ mgbapụ Catacombs na -eweghachi gị ọtụtụ narị afọ laghachi ebe gbara ọchịchịrị na ụwa Paris. Mgbe Paris bụ otu n'ime ndị kacha mara mma n'obodo n'ụwa, catacombs ya dị egwu, na ụfọdụ ga -ekwukwa ntakịrị ụjọ.
N'ihi ya, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ewe ihe egwu n'obi, na nsị goose abụghị mmetụta dị ịtụnanya, wee dee ụlọ mgbapụ Catacombs. Ịgba egwuregwu ụlọ mgbapụ ebe a ga -abụ ahụmịhe na -akpali akpali na mgbanwe ọhụrụ site na ịga n'ubi, ma ọ bụ ịzụ ahịa na Paris.
Izere ụlọ Harry Potter bụ ozi ezinụlọ. Ihe ndozi na egwuregwu mgbagwoju anya na-amasị ụmụaka, na ọnụ ọgụgụ mmekọrịta ụmụaka nwere ike ikwurita okwu. Ọzọkwa, gị na ụmụaka ga -enweta mkpanaka anwansi, ka ha nwee ike nweta ụwa pụrụ iche nke Harry Potter.
Ime ụlọ mgbapụ Harry Potter na Prague bụ 60 nkeji nkeji. N'ime oge anwansi a, ndị otu gị ga -achọta arịa atọ zoro ezo na nzuzo Harry Potter ụlọ mgbapụ, Ụlọ mgbapụ Harry Potter bụ oge na -atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ maka ezinụlọ dum na Prague.
11. Egwuregwu Mgbapụ N'èzí Na Villa Borghese Rome
Onye ọ bụla na -aga Italytali maka nri, Obodo, na obodo wine. Site n'ọchịchọ nke ụlọ mgbapụ na -emeri ụwa, Ebe kachasị elu na Italy abụrụla ụlọ mgbapụ dị ịtụnanya. Ọmarịcha Villa Borghese bụ ebe mmalite 2.5 awa nke idozi ihe mgbagwoju anya. Villa bụ ụlọ mgbapụ n'èzí ebe ị ga -aga n'ihu na -aga n'ihu site na ntụnyere gaa na nkọwa site n'ụgbọ mmiri.
Ụlọ mgbapụ a pụrụ iche dị na Rome. Ya mere, mgbe ị mechara nyocha Colosseum, ị ga -achọpụta ebe zoro ezo mara mma na isi obodo Italy. ikwubi, Villa Borghese bụ ụlọ mgbapụ n'èzí kacha mma na Europe. N'adịghị ka okpuru ulo, ọba akwụkwọ, na catacombs, ebe a ị ga -emekọrịta ihe na ọmarịcha odida obodo Ịtali.
12. Ime ụlọ mgbapụ ụlọ nyocha Bunschoten
Otu awa si Amsterdam, Ime ụlọ mgbapụ dị na Bunschoten bara uru maka ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè njem from any location in Europe. Bunschoten nwere 3 ụlọ mgbapụ, mana ụlọ nyocha kacha mma, na otu n'ime ụlọ mgbapụ kacha mma na Europe.
Iji mezue ozi siri ike, you will step into Dr. Ụlọ nyocha Steiner, dị nnọọ ka ọ hapụrụ ya 7o+ afọ gara aga. Ọrụ gị ga -abụ ịchọpụta ihe mere dọkịta dara ogbenye, ị ga -achọkwa ike na ike gị niile iji dozie ihe omimi a naanị 60 nkeji. O doro anya, ị nwere ike weta 2-3 ndị mmekọ na ozi, yabụ cheta ịde akwụkwọ tupu oge eruo.
ebe a na Save A Train, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka dozie nnukwu ihe omimi nke ụwa. Onye ọ bụla n'ime ọmarịcha ụlọ mgbapụ ndị ọzọ bụ naanị njem ụgbọ oloko si n'ọnụ ụzọ gị.
Ịchọrọ ịdebanye post blọgụ anyị "12 Kachasị ụlọ ịgbapụ n'ụwa" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fbest-escape-rooms-world%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)